Taliyeyaasha degmooyin ka tirsan Muqdisho oo la eryay kadib qaraxyo
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar [Saadaq Joon] ayaa xilalkii ka xayuubiyay taliyeyaasha saldhigyada toban degmo oo kamid ah caasimada dalka, sida uu fahansan yahay Garowe Online.
Degmooyinka hogaanada amniga la eryay waxaa kamid ah; Xamar-wayne, Hodan, Kaaraan iyo kuwa kale, taasoo ka dhigeysay in uu yahay isbedalkii ugu balaarnaa abid lagu sameeyay hay’addaha amniga gobolka Banaadir.
Sidda uu xogta ku helay GO, taliyeyaasha cusub ee loo magacaabay degmooyinka magaala madaxda ayaa ah saraakiisha dhalinyarada ah ee horey uga tirsaneed taliskii NISA ee la kala diray.
Isbedalkaan ayaa ka dambeeyay markii xalay uu Madaxtooyadda ka dhacay kulan deg deg oo laamaha amniga uu isugu yeeray ra’iisul wasaaraha Khayre, kaasi oo lagu gorfeeyay xaalada nabad-gelyo ee caasimadda.
GO ayaa fahansan yahay in kulankaasi ay qayb ka ahaa taliska AMISOM, safiirada dalal ay ku jiraan; Mareykanka iyo Ingiriiska, iyo dowlaha dhinaca amaanka iyo la dagalaanka argagaxisada ka taageera xukuumada.
Waxa kasii horeeyay kulan kale, oo agaasimaha sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin, uu isbuucii hore la yeeshay gudoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho, kuwaasoo uu kala hadlay arrimo ay kamid tahay amaanka.
Illo lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale warsidaha Garowe Online u dusiyay in isbedalkaan uu sameeyay taliye ku xigeenka ciidamada Booliska gobolka Banaadir, kaasi oo laga dhigay sarkaal kamid ahaa NISA, Maxamed Jeego.
Ma cadda sababta shaqada looga eryay taliyeyaasha, balse waxay kusoo beegmaysaa xili amniga magaalada Muqdisho uu umuuqdo mid aanan ku jirin gacanta hay’addaha ku shaqada leh ee dowladda.
Talaabadaan ayaa kusoo aadaysa xili qaraxyo dad badan ay ku geeriyoodeen ay ka dhaceen caasimada oo ay ugu dambeysay shalay oo Sabti ahayd markii ay Al-Shabaab weerartay dhismo ay degan yihiin wasaarado.
MAGACYADA XUBNAHA CUSUB EE LA MAGACAABAY
Maxamed Jeego, taliye ku-xigeenka Booliska Gobolka Banaadir
C/fataax Mire, taliyaha qeybta Waliyo Cadde ee booliska, waxaana ku xigeenkiisana loo magacaabay Shuceyb Abdi
Yaasiin Nur Khayre, taliye Ku xigeenka Qeybta bartamaha
Bashiir Cabdi Siyaad, taliyaha Saldhiga Booliska degmada Hodan
Najiib Carab, taliyaha Saldhigga Booliska degmada Boondheere
Liibaan Shidane, taliyaha Saldhigga Booliska degmada Kaaraan
Xuseen Cadceed, taliyaha Saldhiga Wardhiigley
Ismaaciil Muuse Yuusuf, taliyaha Saldhigga Booliska Dharkeynley
Axmed Taree, Taliyaha Saldhigga Booliska degmada Kaxda
Axmed Khadar, Taliyaha Saldhigga Booliska degmada Xamarweyne
Maxamed C/qaadir, Taliyaha Saldhigga Booliska degmada Waaberi
Soomaaliya: Ciidanka Badda oo dabaal degaya
Soomaliya 10.02.2018. 09:16
Amaanka Muqdisho oo la adkeeyay iyo ciidamo la dhigay wadooyinka iyadoo...
Khasaaraha dhimasho ee qaraxyaddii Muqdisho oo kordhay
Soomaliya 23.12.2018. 10:52
Howlgal ka dhan ah hubka lagu haysto Muqdisho oo billaabanaya iyo digniin lasoo saarey
Soomaliya 03.02.2019. 11:13
Maxaa diiradda lagu saarey Shirka Gollaha Wasiiradda Soomaaliya?
War Saxaafaded 16.03.2018. 01:31
Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo maanta xiran
Soomaliya 30.01.2018. 10:45
Qarax aan horey loo arag oo ka dhacay Muqdisho [Fah-faahin]
Soomaliya 09.09.2018. 11:30
Diiwaan-galinta murashaxiinta Jubbaland oo ka bilaabatay Kismaayo 20.07.2019. 11:01
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika oo ka degay Muqdisho 20.07.2019. 10:18
Isbedel lagu sameeyay hogaanka taliska Mareykanka ee Afrika 20.07.2019. 08:10
Haweenay Xildhibaan ah oo gashay shil Baaskiil lana dhigey Isbitaal 20.07.2019. 01:55